12 egwuregwu kacha mma Disney maka gam akporo | Gam akporosis
12 egwuregwu kacha mma Disney maka gam akporo
Disney enyela anyị ụfọdụ egwuregwu mara mma na na-ewe anyị dị iche iche edemede sitere na site RPGs ka egwuregwu mgbagwoju anya. Egwuregwu maka afọ niile na-ewetara ha ihe odide sitere n'ofe Disney dị iche iche dịka Pixar ma ọ bụ Star Wars.
Ka anyi mee ya usoro egwuregwu a maka Disney nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị ma na ha bụ ndị kachasị mma nke gafeworo ahịrị ndị a; ma ndi ohuru ma ndi nke gara aga.
1 Lelọ nke nro
2 Disney Crossy Road
3 Alaeze Anwansi Disney: Mepụta Ogige Anwansi Gị
4 Mgbapu Disney Getaway
5 Disney Sorcerer's Arena
6 Ndị dike Disney: Agha na ọnọdụ
7 ALAEZE Obi He
8 Disney kpọnwụrụ Free ọdịda
9 PAC-Nwoke: Ralph na-agbaji Maze
10 Star Wars ™: Galaxy nke Heroes
11 Ọ B ọgụ na-egosi ọdịnihu
12 OZI OZI OZI OZI: Sonyere Egwuregwu 3!
Lelọ nke nro
Un 3D nyiwe na Disney odide nke ahụ na-akpọrọ anyị na Mickey Mouse na ndị enyi ya. N'ezie, anyị anaghị eche ihu egwuregwu efu, mana nke kachasị nke ị ga-akwụ ụgwọ iji nweta ọdịnaya ahụ. Anyị na-echegharị nyocha nke egwuregwu SEGA Genesis, yabụ ọ bụrụ na ị gafere ya afọ ole na ole gara aga, ị ga-enwe mmetụta ịnọ n'ụlọ na egwuregwu a nke dịkwala na gam akporo maka afọ ole na ole.
Site na ndi okike nke Crossy Road ka ndi odide Disney nile si bia nke mere na ị na-aga akpọchi ha niile na ị pụrụ ịnụ ụtọ ha ahụmahụ n'ime ọmarịcha onye a na-adịghị agwụ agwụ nke anyị ga-elezi anya ka anyị ghara ịnwụ mgbe anyị na-agafe n'okporo ụzọ. N'okwu a, ihe odide a niile nwere njikọta gburugburu ha nke ga-emeghe mgbe anyị ji ha. Ọ bụghị na ọ gbanwere ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere nke mbụ, mana ọ na - eweta anwansi niile nke Disney maka gị ịnụ ụtọ n'efu na ụlọ ahịa gam akporo.
Na nke a anyị ga-enwe ohere mepụta ogige ntụrụndụ Disney na, ọzọ, ihe odide Disney nile ka anwansi nke ụlọ ọrụ a nke ejiri ihe onwunwe nke ụdị dị iche iche dị ka Star Wars adịghị efu. Anyị na-eche ihu «Theme park» ma ọ bụ onye na-ewu ogige isiokwu nwere ikike iwu karịa ebe nkiri 170, nwee ọ .ụ karịrị 1.500 ọzọ na unlock kpọghee ekwt ruo 200+ odide nke Disney. Nwere onwe ị nwere ike ibudata ya ugbu a.
Mgbapu Disney Getaway
Gameloft alaghachila ọrụ dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịmebe egwuregwu a maka Disney, nke e ji mara ịbụ ogige nke egwuregwu ndị jikọtara ọnụ sitere na egwuregwu mgbagwoju anya na nchịkọta ihe odide. Ọzọkwa anyị nwere katalọgụ dum nke sitere na Star Wars na-agafe Pixar wee bịarute ọzọ n'ihu ihe odide Disney. Anyị nwere ike imeghe Stitch si Lilo na Stitch ma ọ bụ Elsa si na Oyi kpọnwụrụ na ọbụna kee ụlọ ha ka ha biri na ha. Ọ dị ntakịrị Sims, ọ bụ ezie na ọ dị anya na ya. Eziokwu bụ na ọ na-ewe uru nke ndọpụta ọ dabara na ụdị egwuregwu ntakịrị maka afọ niile.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọhụrụ egwuregwu wepụtara site Disney na na nke a, Glu na-elekọta mmepe ya. Ee, anyị ga-aga RPG dị ọcha na-eitatingomi usoro ahụ a hụrụ n'ọtụtụ ndị ọzọ ma gafere usoro ndị a n'ọtụtụ oge. Anyị agaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara myirịta dị n'usoro ihe igwe na Final Fantasy, mana n'ihi na o nwere nnukwu nghọta dị na teknụzụ, ọ bụ n'etiti ndị kacha mma Disney maka ndị na-ege ntị ma eleghị anya ọ bụ obere okenye. Anyị ga-akpọghe ndị enyi ga-akpọrọ ha gaa ọtụtụ ndị iro na-enwe echiche dị mma yana nnukwu nkọwapụta na eserese na nsonaazụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ihe karịa ihe egosiri ugbu a, ị nwere ike ịga budata ya.
Ebe Arebia Disney Sorcerer
Ndị dike Disney: Agha na ọnọdụ
Ọzọ RPG RPG nke PerBlue Entertainment mere na nke site a n'akụkụ n'ọnọdụ anyị laghachi ihe yiri nke gara aga Disney egwuregwu: akpaka agha na ihe karịrị ndị dike 70 Disney dịka The Incredibles, Frozono, Wreck-It Ralph, Vanellope, Judy Hopps, Nick Wilde na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ezie, ọ nwere ọtụtụ ụgwọ iji merie, ebe ọ bụ na ọ na-egosi mgbe ndị egwuregwu na-akwụ ụgwọ iji nwee ọganiihu ngwa ngwa ma nwee ike ihu ndị egwuregwu ndị ọzọ na ọtụtụ ndị na-ahụ n'ịntanetị nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ taa na egwuregwu gam akporo a.
Developer: Ihe Ntụrụndụ PerBlue
ALAEZE Obi He
Lee Disney si n'aka Square Enix, a maara nke ọma maka egwuregwu RPG ya nakwa na ọ bụ ihe kachasị mma ịkpọ oku ka ị wagharịa site na ụwa anwansi nke oge a ka anyị na-ejikwa protas nke ihe omimi ndị a. Enwere ọtụtụ usoro, yabụ nke a bụ RPG nke Square Enix na-emelite na mmalite nke atụmatụ ọhụrụ. Have nwere oche nke kaadị 30, ma wakpo ya na akpaghị aka ka ị nwee ike ịga nke ọma na ndị isi ndị ikpeazụ ga-etinye ihe ha na egwuregwu a maka gam akporo.
ALAEZE MERE Uχ Dark Road
Developer: AKW ENKWỌ ENIX INC
Disney kpọnwụrụ Free ọdịda
Ọ bụrụ na e nwere ihe ihe a ga-akatọ maka egwuregwu Disney ọ bụla bụ maka enweghị mmalite, dị ka ọtụtụ n’ime ha na-eji usoro a maara nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma na egwuregwu mkpanaka, iji weta isiokwu ha na ekwentị mkpanaaka gị. Na nke a anyị nọ n'otu ihe, na oge a detuo egwuregwu EZE ama ama nke Candy Crush Saga. Will ga - ejikọ taịl nile iji gafee ọtụtụ narị ọkwa nke onye protagonist bụ Anna na ndị enyi ya. Anyị agaghị achọpụta ihe ọ bụla banyere egwuregwu a nke gosipụtara nke EZE; dị ka nke a mere otu mgbe ahụ na onye ọzọ ... have nwere ya n'efu na gam akporo ka ị wee nwee ike ịmalite ịmecha ọkwa.
Developer: Obodo Jam, Inc.
PAC-Nwoke: Ralph na-agbaji Maze
Anyị na-alaghachi na otu egwuregwu Disney ndị mbụ edepụtara na Playlọ Ahịa Google. O mekwara ya na Pac Man nke mere na ka anyị nwere Ralph dị ka Disney protagonist na na nke a anyị ga-enyere ha ahụmahụ. Ọ dịghị mkpa ịkọ ihe ọ bụla gbasara egwuregwu a na-amaghị, ebe ọ bụ na anyị na-elezi anya na ọgwụ ndị ahụ ga-apụ ka anyị wee nwee ike iwepụ ndị iro na ndị ike. Ọzọkwa, Disney laghachiri na ibu na egwuregwu nke na-abụghị nke mbụ, mana nke ahụ nwere usoro mmeri nke iji kpụọ akụkụ nke ndị ọzọ dị ka PacMan n'onwe ya.
Star Wars ™: Galaxy nke Heroes
Anyị na-aga n'ihu na freemium nke Star Wars na Disney nwere egwuregwu ebudatara nke ukwuu nke ọtụtụ nde mmadụ na-egwu nke ndị egwuregwu. Star Wars bụ nke Disney, ma na nke a ọ na-ewetara anyị ọgụ RPG ọzọ nke anyị ga-enwe n'aka ndị edemede Han Solo: A Star Wars Story, The Last Jedi na Rogue One Dị ka anyị na-eme enweghị imeghe ihe odide ahụ ma were ha lụso ọgụ ka ị mara nke ọma. Ee ọ bụ eziokwu na ihe na-esi isi nke ukwuu ma anyị ga-achọ ka ọ bụrụ ihe yiri nke ahụ Mandalorian na nke ahụ na-eme ka anyị bịarukwuo nso mmụọ nke Star Wars. Disney ebe a na-eme ka ọ dị mfe, mana ọ dabara ọtụtụ.
Ọ B ọgụ na-egosi ọdịnihu
Ee ee ha nwere ika MARVEL n'obi ha ka ha buru anyi n'ihu ndi isi Onye amara nke Stanley Lee. Site na fim niile ewepụtara n'afọ ndị na - adịbeghị anya yana egwuregwu MARVEL, Disney nwere ịnyịnya mmeri ebe a ọzọ. Ọzọkwa RPG nke ị kpọghee ndị dike ma si otú a ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200 ị nwere ike melite. Dị ka egwuregwu ndị ọzọ Disney RPG, anyị ga-etolite otu kachasị mma iji chee ọtụtụ ndị iro ga-abịa ihu.
ỌT FutureT Future MARA maka ọdịnihu
OZI OZI OZI OZI: Sonyere Egwuregwu 3!
Multiplayer na ntanetị maka a pudị egwuregwu mgbagwoju anya 3 na nke ahụ na-eme ka o doo anya na otu nke ochie nke ụdị dị ka Candy Crush Saga. Ihe karịrị 185 ndị ​​dike na ndị nlekọta na-echere gị n'otu n'ime egwuregwu Marvel kachasị egwu na Playlọ Ahịa Google. Ga-enwe ike igwu egwu megide ndị egwuregwu ndị ọzọ na egwuregwu 3 nke anyị na-agaghị akọwa ihe ọ bụla gbasara ijikọta akụ ndị ahụ iji nwee ọganiihu.
Ihe mgbagwoju anya MARVEL: dike RPG
Developer: D3 Gaa!
Ndị a bụ 12 egwuregwu Disney kachasị mma nke ị nwere ike ibi na ndụ nke ihe ama ama ama ama ama ama ya, dị ka nke Marvel, Pixel ma ọ bụ Star Wars na mbara igwe ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 12 egwuregwu kacha mma Disney maka gam akporo
New Oppo F19 Pro na F19 Pro + 5G, ekwentị abụọ dị ọnụ ala na ngwa ngwa ngwa ngwa ruru 50 W
WhatsApp ga-emesị encrypt na nkwado ndabere na mpaghara anyị bulite na Draịvụ na iCloud